जाडो मौसममा गर्न नहुने सात काम – Samatal Online
जाडो मौसममा गर्न नहुने सात काम
७ मंसिर २०७६, शनिबार Santa Kumar Shrestha0Comments
जाडो मौसम शुरु भएसंगै हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका असरहरु देखापर्न थाल्छन् । जाडो मौसममा धेरै मानिस अत्यधिक खाने, कम शारीरिक परिश्रम गर्ने तथा अत्यधिक सुत्ने गर्दछन् ।
कतिपय मानिस त घाम लाग्दा घाम छाड्न नखोज्ने तथा बिहान–बेलुकी कोठाभित्रै बस्न रुचाउँने गर्दछन् । जाडो मौसममा रुघा, खोकी, एलर्जी र ज्वरो आउनु सामान्य हो भने कतिपयलाई चाया पर्ने, छाला सुख्खा हुने तथा शरीर फुस्रो हुने गर्दछ ।
अझ कतिपय अवस्थामा सामान्य ठानिएका विषयले समेत जाडो मौसममा मानिसलाई असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यस्तोमा हामीले त्यस्ता बानी तथा लतहरुलाई त्याग्नु नै उत्तम हुन्छ । हामी सातवटा टिप्सहरु दिदैछौँ, जो जाडो मौसममा गर्नु हुँदैन ।
१. कम पानी पिउनु हुँदैन
जाडोमा गर्मी मौसममा जस्तो तिर्खा लाग्दैन । तर पनि पानी पिउन छाड्नु हुँदैन । जाडोमा हाम्रो शरीरलाई दैनिक दुई लिटरभन्दा बढी पानीको आवश्यक पर्दछ । अन्यथा डिहाइड्रेसनले मिर्गौला, अपच र पेट दुख्ने लगायतका समस्याहरु आउन सक्छ । साथै जाडो मौसममा अत्यधिक तातो पानी पनि पिउनु हुँदैन ।
२. धेरै लुगा लगाउनु हुँदैन
जाडोबाट बच्न अधिकांश मानिस धेरै लुगा लगाउने गर्दछन् । तर धेरै लुगा लगाउनु जाडोबाट बच्ने राम्रो उपाय भने होइन । धेरै लुगा लगाउँदा शरीरमा गर्मी हुन्छ र पसिना आउँछ । पसिनाले शरीरलाई झन् चिसो बनाउने गर्दछ । तसर्थ जाडोमा लुगा लगाउँदा मांसपेशीलाई न्यानो पार्ने ज्याकेट वा स्विटर लगाउनु उत्तम हुन्छ ।
३. पन्जा/मोजा लगाउनु अनुपयुक्त
चिसोबाट बच्नका लागि भन्दै हातमा पन्जा र खुट्टामा मोजा लगाउनु नराम्रो होइन । तर यसो गर्नाले चिसोबाट बच्न भने सकिदैन । हात र खुट्टालाई ढाकेर बस्नुको अर्थ वातावरणीय परिवर्तन स्विकार गर्न नसक्नु वा त्यसका लागि शरीरलाई अवरोध गर्नु हो । त्यसैले जाडोमा मोजा लगाएर सुत्ने बानी राम्रो होइन । यसले मुटुबाट जोर्नीमा प्रवाह हुन रक्त सञ्चालनमा प्रभाव पार्दछ । मोजा लगाएर सुत्दा जोर्नीमा रगत जम्ने खतरा हुन्छ ।
४. जाडोमा धेरै खानु हुँदैन
जाडो मौसममा हामी शरीर तताउनभन्दै अत्यधिक मात्रा परिकारहरु खाने गर्दछौँ । जसमा माछा मासुजन्य पर्दाथ, बढी चिल्लो र प्रोटिनयुक्त तथा जंक फुडलगायतका खानेकुरा पर्दछन् । तर खानाको मात्रा बढे पनि जाडोको समयमा हामी कम मात्रामा काम गर्दछौँ । जसले शरीरमा तौल बढाउनुका साथै रोगको खतरासमेत बढाउने गर्दछ ।
५. धेरै सुत्नु हुँदैन
जाडो मौसमको अर्काे खराबी भनेको अधिकांश मानिस धेरै समयसम्म सुत्ने गर्दछन् । साँझ चाडैं ओच्छ्यानमा पुग्नेहरु बिहान अबेरसम्म निद्रामा नै हुने गर्दछन् । अझ कतिपय मानिस त बिहानको खाना खाएपछि वा दिउँसो खाजा खाएपछि समेत सुत्ने गर्दछन् । यसले शरीरमा आलश्यता बढाउनुका साथै काम गर्न वा ड्युटीमा जान फर्कन समस्या हुने गर्दछ ।
६. नशाजन्य पर्दाथको सेवन बर्जित
कतिपय मानिस जाडो मौसममा नशाजन्य पर्दाथको सेवन गर्ने गर्दछन् । जाडोमा शरीर न्यायो पार्ने नाममा अत्यधिक मदिरा पिउने, धुम्पान गर्ने तथा अन्य नशाजन्य पर्दाथको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर यो बानीले शरीरमा अत्यधिक असर पार्ने गर्दछ । त्यसैले जाडोमा दिनभर निष्क्रिय भएर बस्नुभन्दा पार्कतिर घुम्न जादा वा काममा व्यस्त हुँदा रक्त सञ्चार तीव्र भई स्वतः शरीर न्यानो हुन्छ ।
७. अनावश्यक मेकअप नगर्नुहोस्
जाडोमा शरीरमा हुने एलर्जी, फुस्रोपना तथा छाला सुख्खा हुँदा हामी लोसन तथा क्रिमको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ । तर एकै किसिमको वा एकै ब्राण्डको सामाग्री प्रयोग नगर्दा हाम्रो शरीरमा यसले समेत हानी पुर्‍याउँने गर्दछ । कालान्तरमा शरीरमा यसले रोगसमेत निम्त्याउँन सक्छ । त्यसैले अनेकथरी क्रिम र लोसनको प्रयोग गर्नुको सट्टा एकै किसिमको सौन्दर्य सामाग्रीको प्रयोग गर्ने बानी बसाउनु पर्छ ।